Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny MacBook Pro (IV): SuperDrive Portable | Avy amin'ny mac aho
Applelised | | Mac OS X, Tutorials
Ahoana ny mpanaraka an'i Applelizados! Hitondra anao ny fizarana fahaefatra sy farany amin'ny tutorial mega-nay Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny MacBook Pro. Androany dia hanazava ny fomba hampiasana indray ny singa SuperDrive izay hongotantsika izahay ary hanovana azy io ho lasa singa azo entina.
1 Fiainana vaovao ho an'ny SuperDrive.
2 Andao hatao
Fiainana vaovao ho an'ny SuperDrive.
Tsy taona vitsy lasa izay, ny fampiasana CD-DVD dia saika voatery ho an'ny mpampiasa. Avy amin'ireo mpamily mpanonta, ny boky torolàlana momba ny solosaina finday na ny fahombiazana vao haingana an'ny tarika ankafizinay dia nozaraina indrindra tamin'ireo endrika ireo.
Miaraka amin'ny fiovan'ny filozofia fitahirizana sy fizarana rakitra, ny fampiasana ireo fitaovana ireo dia nanjavona tamin'ny fiainana andavanandron'ireo mpampiasa solosaina. Ankehitriny dia manana tolotra Clouds On Line maro izahay, programa DD lehibe, hampidina na hihaino mozika nefa tsy mila misintona rakitra ...
Azontsika atao ny mahita io fisehoan-javatra io amin'ny fironan'ny mpanamboatra, ary mihena hatrany ny solosaina finday misy mpamaky DVD / mpanoratra. Ohatra iray ny MacBook vaovao izay mahafoy ny SuperDrive mitady habe sy lanja kely kokoa. Na eo aza ny zava-drehetra dia mitazona tahiry i Apple SuperDrive USB amin'ny € 89 ho an'ireo izay te hahay mampiasa DVD amin'ny Mac-ny.
Ny iray amin'ireo dingana ato amin'ity lesona ity dia ny fanoloana ny SuperDrive anay amin'ny DD, ny fifanakalozana ny fahaizana mamaky / manoratra DVD ho tahiry bebe kokoa. Ny olana mety ho hitantsika dia ny fananantsika singa anatiny mitazona any an-trano nefa tsy ampiasaina. Mba hisorohana an'io dia afaka manao zavatra 2 isika: ny iray dia ny mivarotra azy ho solony ary ny iray hafa dia ny manova azy ho lasa fitaovana azo entina amin'ny fomba Apple madio indrindra.
Noho izany dia tsy maintsy mividy adaptatera / trano isika mba hahafahantsika manova ny SuperDrive anatiny ho lasa Portable SuperDrive. Ity adaptatera ity dia avy amin'ny The Natural 2020 ary amin'ny fotoana andaniany antsika vola vitsivitsy 15 € isaky ny Amazon.com.
Ny fivorian'ny SuperDrive ao anaty casing dia tsotra dia tsotra, ny zavatra tokana tokony hotandremantsika dia ny mampiditra ny mpampitohy ao amin'ny tarika misy antsika. Avy eo dia apetrakay ao anatin'ilay tranga ilay singa, averina apetraka indray ny tariby USB. Ny fametrahana ny fonony ivelany dia tsy mila manery fotsiny ny zorony isika mba hifanaraka tsara ireo takelaka.
Ary vonona !! Tsotra be izany fa manana kapila USB SuperDrive isika samy manana azy raha sanatria ilaintsika izany na azontsika atao ny mivarotra azy fotsiny ho kapila DVD ivelany mba tsy hitehirizana azy.
Amin'ity lahatsoratra ity dia vitantsika ny andiam-pampianarana «Ahoana no hamerenana amin'ny laoniny ny MacBook Pro». Tsy afaka manasa anao fotsiny izahay amin'ny fampianarana manaraka momba ny Applelised.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny MacBook Pro (IV): SuperDrive Portable
jmj dia hoy izy:
Nametraka ilay superdrive ho drive ivelany aho fa tsy afaka milalao DVD satria milaza amiko fa tsy nisy DVD drive hita. Namaky aho fa tokony hanova fisie izay ao anaty rafitra ka hahafantatra fa ivelany izy io nefa tsy manana alalana ary tsy afaka manova azy ireo. Fantatrao ve izay azoko atao?
Mamaly an'i jmj